को बन्छ मिस्टर लुम्बिनी ? -::DainikPatra
बुटवल । बुटवलमा मिस्टर लुम्बिनी २०१७ हुँदैछ । लुम्बिनी अञ्चलको प्रतिष्ठालाई ध्यानमा राख्दै मिस्टर लुम्बिनी २०१७ को अन्तिम प्रतिस्पर्धा यही असोज ३१ गते बुटवलको सिद्धार्थ कटेजमा हुँदैछ । पहिलोपटक लुम्बिनीमा पुरुष सौन्दर्य प्रतियोगीतालाई फरक रूपबाट प्रस्तुत गर्न लागेको मञ्जरी ग्रुपले बताएको छ । यस पटकको मिस्टर लुम्बिनी २०१७ ले पुरस्कार स्वरूप मोटरसाइकल पाउनेछन् । फस्ट रनर अपले आइ थ्रि ल्यापटप र सेकेण्ड रनर अपले स्मार्ट फोन पाउने मञ्जरीले जनाएको छ ।
नेपाली गीतबाट आरम्भ हुने मिस्टर लुम्बिनी २०१७ मा करिब ५ वटा सिक्वेन्समा प्रतियोगीले आफूहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछन् । अहिलेको चलेको टे«न कुर्थी सिक्वेन्सवाट सुरु हुने मिस्टर लुम्बिनी २०१७ नेपाली पोसाक दौरा–सुरवालमा गएर अन्त्य हुनेछ । बीचमा बुद्ध र लुम्बिनीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने फरक किसिमको पहिरनमा समेत कार्यक्रम रहने छन् ।
करिब ८३ जना सहभागीले दिएका आवेदन मध्ये चार चरणको अडिसनपछि अहिले उत्कृष्ट ८ जनालाई मात्र मिस्टर लुम्बिनी २०१७ को अन्तिम प्रतियोगिताको लागि छनौट गरिएको हो । उत्कृष्ट ८ ले असोज ३१ गतेलाई आफूलाई तयार पारेका छन् । जोशनमान गौचानको प्रशिक्षण, आइएफसी बुटवलको पहिरन र निलडेभिड युनिसेक्स बुटवलको हेयर स्टाइलमा सहभागीले आफूलाई प्रस्तुत गर्नेछन् ।
प्रतियोगितामा विभिन्न उद्देश्यसहित युवाहरूको सहभागिता रहेको छ । करिब १५ दिनको प्रशिक्षण लिई उनीहरू आफूलाई अन्तिम प्रतियोगिताको लागि तयार पारिरहेका छन् । मिस्टर लुम्बिनी २०१७ व्यवसाय नभई युवाको लागि अवसर भएको आयोजक मञ्जरी ग्रुपका अध्यक्ष विशाल एच आलेले बताए । उनका अनुसार १५ दिनको प्रशिक्षणपछि युवाहरूमा साँच्चै परिवर्तन भएको महसुस गरेका छन् ।
विभिन्न स्थानको भ्रमण, फरक व्यक्तिहरूको प्रशिक्षण र विविध क्रियाकलापको कारण उनीहरूले आफूलाई फरक अनुभव गरेको आलेको भनाइ रहेको छ । पुरस्कार राशिभन्दा पनि अवसरको लागि युवाहरू मिस्टर लुम्बिनी २०१७ मा आकर्षण भएको उनको भनाइ रहेको छ । मिस्टर लुम्बिनीले युवालाई प्रत्यक्ष प्रतियोगितालाई पहिलो पटक कोरियोग्राफी गरेका जोशनमान गौचनका अनुसार प्रतियोगितामा एक चार्म भएका युवाहरू सहभागी भएका छन् ।
प्रतियोगितामा लाईभ म्युजिकको माध्यममा युवाहरूले आफूलाई ¥याम्प वाकमा प्रस्तुत गर्नेछन् । यसका साथै लामो समयदेखि बुटवलमा फेशन डिजाइनिङ कक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको आइएफसी बुटवलले तीन वटा डिजाइनमा प्रतियोगीहरूलाई आफ्नो पहिरनमा प्रस्तुत गर्नेछ । नेपालमै चलेको ब्राण्ड निलडेभिडको हेयर स्टाइलमा प्रतियोगीहरूले आफ्नो नयाँ लुक्स प्रस्तुत गर्नेछन् भने क्याजवल ब्युटीपार्लरको मेकअप तथा श्रृंगारमा उनीहरूले ३१ असोजमा प्रस्तुत गर्नेछन् । मिस्टर लुम्बिनी २०१७ मा क्लासिक टेकले कार्यक्रम स्थलमा वाइफाई फ्रि गर्ने तथा अन्य थुप्रै सुविधासमेत प्रदान गर्ने भएको छ ।
यस्ता छन् प्रतिस्पर्धी
मिस्टर लुम्बिनी २०१७ मा हाल मणिग्राम रूपन्देहीका सिद्धार्थ गैरेले आफूलाई प्रतियोगी नम्बर एकमा प्रस्तुत गर्दैछन् । उनी यसअघि दुई वटा यस प्रकारको प्रतियोगितामा सहभागी भएर उपाधि जिति सकेका हुन् । उनले मिस्टर टिन लुम्बिनीमा मोष्ट ट्यालेण्ट, मिस्टर एसइई लुम्बिनी २०१७ को उपाधि विजेतासमेत रहेका छन् ।
गैरेको विचारमा उनका लागि मिस्टर लुम्बिनी ड्रिम प्रोजेक्ट हो । उनले मिस्टर लुम्बिनीमा सहभागी भएर आफ्नो व्यक्तित्व विकासमा बढी ध्यान दिने बताउँछन् । मिस्टर लुम्बिनी २०१७ को यो यात्रामा पनि उनले आफूले आफूलाई धेरै कुरामा विकास भएको महसुस गरेका छन् । गैरे पनि यो पटकको उपाधिका लागि बलिया दावेदार मानिन्छन् ।
बुटवल– १८ का भण्डारी यस किसिमको प्रतियोगिताको लागि भने नयाँ हुन् । तर पनि उनीसँग २ वटा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेको अनुभव रहेको छ । सुजनलाई पनि यो प्रतियोगीताको चार्मले आकर्षण गरेको छ ।
उनलाई मिस्टर लुम्बिनीमा आएर आफूमा धेरै कुराको विकासमा कमी भएको महसुस भएको छ । उनी पनि मिस्टर लुम्बिनी २०१७ लाई प्रयोग गर्दै मोडलिङ फिल्डमा अघि बढ्न चाहन्छन् ।
मिस्टर देवदह २०१७ को उपाधि जितेका खैरनीका १८ वर्षिय प्रशान्त चापागाईं सहभागी भएका छन् । उनले यही वर्ष मिस्टर देवदह २०१७ को उपाधि जितेका हुन् । खेलकुदमा रुचि राख्ने प्रशान्त भविष्यमा फोटोग्राफीलाई अघि बढाउने सोचमा रहेका छन् ।
तिलोत्तमा कलेजमा विज्ञान संकायमा कक्षा ११ अध्ययनरत चापागाईं क्रिकेटको ठुलो फ्यान हुन् । उनलाई मिस्टर लुम्बिनी २०१७ ले आफूमा आत्मविश्वास बढेको बताउँछन् ।
बुटवल सुख्खानगरका १७ वर्षिय सौरभ रेग्मीलाई गीतारसँग रम्न निकै मनपर्छ । संगीतमा रुचि राख्ने सौरभलाई मिस्टर लुम्बिनी २०१७ एक सप्राइज हो । उनले मिस्टर लुम्बिनी २०१७ मा भाग लिने योजना बनाएका थिएनन् ।
तर पनि केही सिक्नकै लागि यो स्थान रोजेको उनको भनाइ रहेको छ । अहिले उनी एभरेष्ट कलेजमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत रहेका छन् । प्रतियोगी नं. ४ रहेका सौरभलाई भविश्यमा सफल गीतारिस्ट बन्ने रहर छ ।
बुटवलमै जारी अर्काे प्रतियोगितालाई बीचमा छोडेर मिस्टर लुम्बिनी २०१७ मा सहभागी बुटवलका १७ वर्षका प्रमोद भण्डारी वाइल्ड कार्ड इन्ट्री प्रतियोगी हुन् । उनलाई मिस्टर लुम्बिनी २०१७ को प्रतियोगी नम्बर ५ मा हेर्न सकिन्छ ।
अक्सफोर्ड कलेज बुटवलमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत प्रमोदलाई नयाँ ठाउँ घुम्न मनपर्छ । यस किसिमको प्रतियोगितामा सहभागी भएर जित्नु भन्दा पनि सिक्नका लागि आफू सहभागी भएको उनको भनाइ रहेको छ । उनलाई भविश्यमा एक सफल व्यवसायी भएको देख्न सकिनेछ ।
यस पटक प्रतियोगी नं. ६ को रूपमा बुटवलका १७ वर्षिय मन्जेस गिरीलाई देख्न सकिनेछ । मन्जेस सानैदेखि संगीतका विद्यार्थी हुन् । उनलाई संगीतमा रुचि रहेको छ । खेलकुदमा रुचि भएका मन्जेस जिल्ला तथा क्षेत्रका धेरै प्रतियोगितामा उत्कृष्ट भएका छन् ।
५ फिट ८ इन्च हाइट भएका मन्जेसलाई यो प्रतियोगिता जित्छु जस्तो लागेको छ । आफूमा मिस्टर लुम्बिनी २०१७ ले धेरै कुरा परिवर्तन गरेको उनको भनाइ रहेको छ । मन्जेस २०१७ मा भएको साताँै राष्ट्रियस्तरको बास्केटवल प्रतियोगीतामा सहभागी भइसकेका छन् ।
मिस्टर लुम्बिनी २०१७ को सबैभन्दा अग्ला प्रतियोगी बुटवल ट्राफिक चोकका संजीव श्रेष्ठ हुन् । उनको विचारमा आफ्नो प्रतिभा देखाउने सबैभन्दा उत्तम स्थान मिस्टर लुम्बिनी हो । उनको हाइट ५ फिट १० इन्च रहेको छ ।
खेलकुदमा रुचि राख्ने संजीवको विचारमा मिस्टर लुम्बिनी आफैमा एक ठुलो कार्यक्रम हो । उनले यो प्रतियोगितामा आफूलाई फरक अनुभव भएको बताउँछन् । एभरेष्ट कलेज बुटवलमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत उनी म्यानेजमेन्टका विद्यार्थी हुन् ।
प्रतियोगतामा निकै बलिया मानिएका दावेदार हुन् पवन आचार्य । १९ वर्षका पवन क्यानन कलेजबाट कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेर बसेका विद्यार्थी हुन् । उनलाई यो प्रतियोगिता जित्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
मिस्टर देवदह २०१७ को फष्ट रनर अप उपाधि समेत पाएका उनलाई मिस्टर लुम्बिनी २०१७ को उपाधिले आकर्षण गरेको हो । प्रतियोगितामा जित हार हुने भएकोले उपाधिमा सक्षम सहभागी आउनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । उनी आफ्नै गाउँमा रहेको चरङे युवा क्लबका सक्रिय सदस्यसमेत हुन् ।